Mihetsika Mba Hitondra Ny Anjara Birikiny Amin’ny Fampandrosoana An’i Madagasikara Ireo Zanaka Ampielezana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jona 2016 10:35 GMT
Sorabaventy famantarana ny fihaonan'ny Zanaka Ampielezana tao Aix-en-Provence (fahazoandalana avy amin'ireo mpikarakara)
Farafaharatsiny misy 120.000 ireo mpikambana amin'ny Zanaka Ampielezana malagasy any amin'ireo tanibe 5 ary farahakeliny 2.000 ireo fikambanana eran'izao tontolo izao miasa ho an'ny fampandrosoana an'i Madagasikara. Saingy ankehitriny anefa, mikombona sady sahirana vao tafapàka amin'ny daholobe ny fandraisana anjara ataon'ny tsirairay na fandraisana andraikitra iarahana ho fampandrosoana an'i Madagasikara. Fiarahamonim-pirenena midadasika somary mifangaroharo ny Zanaka Ampielezana Malagasy, nefa, manana ny lanjany tsy azo atao tsinontsinoavina ao anatin'ny toekarem-pirenena. Tombanan'ny banky iraisam-pirenena ho nampiditra (famindràna vola) 13 tapitrisa USD isan-taona (PDF) ny zanaka ampielezana tao anatin'ny 10 taona farany teo.
Manoritsoritra io vondrona mifangaroharo io toy izao i Lalatiana :
Ny zanaka ampielezana dia niforona avy tamin'ny alalan'ireo fivezivezena marobe heverina ho fifindramonin'ny fahalalàna, fa tsy dia ny fifindramonina noho ny asa loatra. Samihafa amin'ireo mpifindra-monina ao Afrika sy Magreba, izay tany ampiandohana, niondrana faobe mba hamaly ireo filàna hery mpamokatra tamin'ireo orinasa sy ireo tolotra tany amin'ireo firenena mandroso any avaratra, nandeha tany Eoropa ny malagasy iray mpifindramonina mba handranto fahalalana ambony ho azy, mba hanatanterahany ireo hetahetany ara-tsosialy ao anaty fiarahamonina malagasy izay nihefvitra foana hatry ny fahagola hoe fototra tena ilaina ny fahalalàna. Monina ao Frantsa ny betsaka (métropole sy DOM-TOM, singanina amin'izany ny ao La Réunion), nefa koa any Alemàna, Soisa, Belzika, Italia, Norvezy, efa misy koa ao Kanada sy any Amerika, toeram-baovao fanoharana ny fahombiazana na ao amin'ny tanibe Afrikana, na izany aza dia vitsy ireo nanao fanadihadiana sosiolojika na antropolojika momba ireo Malagasy ampielezana.
Fiparitahan'ny isan'ny zanaka ampielezan'i Madagasikara ao Frantsa araka ny sokajy sosialy sy arak'asa, loharano avy amin'ny DDIA (nahazoana alalana).
Mba hahafahana mifankahafantatra bebe kokoa sy ho fiarahana mandroso, fikambanana marobe no nanapa-kevitra hamolavola fihaonambe iray mandritra ny 3 andro hamondronana ireo mpiasa miasa ho fampandrosoana an'i Madagasikara sy ireo izay liana amin'izany. Ahitana dinika an-databatra boribory 12 ny fivoriana, atrikasa 10, fifampiresahan'ireo fikambanana ary ireo mpanakanto, ireo fampisehoana ara-kolontsaina sy lanonana iray famaranana.
Fihaonambe iray mba hahitana izay tetikasa mendrika ho an'ny tsirairay
Hampivondrona mpivory manakaiky ny 600 io fihaonambe mandritra ny 3 andro io, ao amin'ny anjerimanontolon'i Aix-en-Provence.
Anisan'ny tanjon'ireo fihaonana ny:
- hampahafantatra ireo Malagasy ampielezana, sy izay tiany hahatongavana
– hiasa aminà fotokevitra izay iraisan'izy ireo, ao anatin'ny fitsinjovana ny firaisankinan'ny olom-pirenena
– hamantatra tsara kokoa ireo filàn'i Madagasikara amin'ireo fifanakalozana manankarena noho ny fisian'ireo mpandray anjara ara-toekarena sy ny fiarahamonim-pirenena sivily malagasy.
Amin'ireo teny hafa, manana firehana ho toy ny Toerana fampirantiana io fihaonambe io, tsy ho an'ny Asa anefa fa Fampirantiana ho an'ireo “atrikasa andalana sy mila hatao ho an'i Madagasikara” ary andrasana amin'ireo mpandray anjara rehetra ny hizara ny fahaizamanao azon'izy ireo ary ireo fomba fijeriny mikasika ny hoavin'i Madagasikara.
Sary torohay manazava ny antompisian'ny fihaonana Zama (fahazoandàlana nomen'ny Zama)
Hetsika voalohany amin'ny karazany ao Eoropa
Ahitana latabatra boribory 12 hahafahan'ireo mpandray anjara mandinika mikasika izay fomba hanaovana asa miaraka ho fanasoavana an'i Madagasikara ary hahasoa kokoa ny zanaka ampielezana, ka ho fanohanana dia ao ireo fampirantiana, fandefasana ireo sarimihetsika, ireo fivoriana, ireo latabatra boribory, ireo adihevitra, ireo atrikasa ary koa ireo fampirantiana ara-kolontsaina, manasongadina ireo mpanakanto malagasy izay mitrandraka ny sehatra iraisam-pirenena.
Tsapan'ireo mpiara-mamorona ny tetikasa ao Eoropa, Roger Rabetafika sy Patrick Rakotomalala fa somary avo fikendry ihany ny fijerin'izy ireo amin'ny fandraisana anjara voalohany amin'io karazana io ao Eoropa:
Tena tetikasa avo fikendry tokoa (ny tetikasa) Zama, voalohany, satria ity tranga ity no lehibe voalohany indrindra teo amin'ny tantaran'ny malagasy ampielezana manerana izao tontolo izao, manaraka izay, satria, toy ny manafangaro hahazoana ‘mayonnaise’ tsara, tsy ho tanteraka ny fahombiazany sy ny fahatanterahany raha tsy avy amin'ny alalan'ny fandraisana anjara, ho lazaiko bebe kokoa – ny firaisana tsikombakomba – amin'ireo rehetra. .. […] Ary amin'ny maha-voalohany dia tsy anananay mihintsy ny tondro afaka manamafy tsy amim-pisalasalana ny fahombiazany. Saingy manana faharisihana izahay hoe afaka handresy lahatra ny vahoaka arakaraky ny fihenjanana sy ny fitakiana amin'ny zotra arahanay.
Voafidy vokatry ny fanadihadiana iray natao tamin'ireo olona liana amin'ny ho avin'i Madagasikara ireo resaka an-databatra boribory, mba hanajana ny filozofia “avy aminareo, ho anareo” ananan'ilay tetikasa. Hanafàna ireny latabatra boribory ireny ireo manampahaizana iraisam-pirenena sy ireo malagasy mpisehatra eny an-kianja. Ny fahasamihafan'ireo zanaka ampielezana araka izany no manazava ihany koa ny fahasamihafan'ireo lohahevitra nofinidy, izay miainga avy amin'ny famoronana ny orinasany any Madagasikara, tonga amin'ny fampandrosoana maharitra na ny famantarana ara-kolotsaina ny malagasy rehefa monina any ivelany. Ny lahadinik'ireo latabatra boribory:
Ny lahadinikn'ireo latabatra boribory ao Zama Aix (nahazoana alalana)
Pascale Jeannot manazava ny fandraisany anjara amin'ny tetikasa Zama.
Pascale Jeannot, mpamorona ny Fandaharana Hanoherana ny Drepanositozy ao Madagasikara ary mipetraka any Frantsa nandritra ny 21 taona, dia manantena hizara ny zavatra niainany sy ireo sosokeviny momba ireo fanao mahomby raha resaka tetikasa fahasalamam-bahoaka any Madagasikara:
Hatramin'ny taona 2008 no nampidirana tao anatin'ny Fandaharan'ny Minisiteran'ny Fahasalamam-bahoaka tao Madagasikara ny Drepanositozy. Aretina iray azo avy amin'ny tarazo fahita matetika manerana izao tontolo izao ny Drepanositozy ary mamono zaza an'arivony ao Madagasikara […] Tombony iray mba hizaràna miaraka ireo traikefantsika io fihaonana io, izay azontsika, na ho entintsika any Madagasikara. Fianarana indray mampita amin'ny fomba hafa fa tsy ireo varavarankely virtoaly fotsiny.
Aina, mipetraka any Marseille, manazava mandritra ny fifanakalozana tamin'ny imailaka izay nahaliana azy tao amin'io fihaonan'ireo any ampielezana io:
Ny androantokom-piaianako dia tao Frantsa, nefa malagasy ny fianakaviako. Misy faniriana tao, mino aho, ho anay ny mba hifankahita ary mba hiresahana mikasika ny kolotsaina safiotra maha-izahay anay.
Ivelan'ireo latabatra boribory natao hiadiana hevitra momba ireo lohahevitra samihafa, manomana fihaonana iray ho an'ireo fikambanana, ireo mpanakanto, ireo fampirantiana ara-kolontsaina, ireo fandefasana sarimihetsika sy lanonam-pamaranana ihany koa ilay fihaonambe. Ity ny sary iray mamintina ireo fandefasana sarimihetsika nandritra ny fihaonambe:
Ireo fandefasana sarimihetsika nandritra ny fihaonambe Zama
Ny tena tanjon'ny fivoriana hatreto dia ny hahafantatra sy hampahafantatra ireo asa mivaingana ataon'ny tsirairay na iarahan'ireo malagasy ary mba hanamoràna ny fandraisana andraikitry ny rehetra mankamin'ny tanjona iraisana ho fampandrosoana an'i Madagasikara. Mba hahalalàna bebe kokoa mikasika ny fizotran'io fihaonana io, indro ny antsipirihan'ny fandaharana mikasika ny fivoriana sy ny fomba hahatongavana ao.
8 ora izayEtiopia